Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa Jimcihii ku booriyay dowladda Soomaaliya in ay abaabusho doorashooyin "aan dib u dhac lahayn", qaraar uu goluhu hoosta kaga xarriiqay halista amni ee dalka uga imaaneysa Al-Shabaab iyo kooxaha hubeysan.
Golaha ayaa xoojiyay muhiimadda ay leedahay in la dhiso awoodda ciidamada Soomaaliyeed iyo hay'adaha dalka si ay awood ugu yeeshaan maareynta khataraha imminka jira iyo kuwa mustaqbalka, iyadoo ciidamada Midowga Africa, ee AMISOM loo oggolaaday in ay gacan ka geystaan in ay waajibaadkooda amni ku wareejiyaan dowladda Soomaaliya.
Golaha Ammaanka ayaa walaac ka muujiyay dib u dhaca ku yimid dhameystirka hannaanka doorashooyinka sanadkan. Waxa uu ku booriyay dowladda federaalka iyo dowlad-goboleedyada "in ay abaabulaan doorashooyin xor ah, caddaalad ah, lagu kalsoonaan karo oo loo dhan yahay" iyadoo la raacayo qodobada heshiiskii 17- kii September 2020.
Xubnaha Golaha ayaa soo dhoweeyay sida ay dowladda uga go'an tahay in ay si wadajir ah ula howlgasho AMISOM "si ay u noqoto hoggaanka howlaha amniga ee Soomaaliya."
Laakin bey yiraahdeen "Soomaaliya wali awood uma lahan in ay mas'uuliyad buuxda iska saarto amnigeeda iyo in la wiiqo Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee hubeysan iyo dhisidda nabad waartaba ay u baahan yihiin iskaashi joogto ah oo goboleed iyo mid caalami ah."